GOG ine LInux vhezheni yeShadow Warrior Classic Redux | Linux Vakapindwa muropa
Zvirinani kunonoka kupfuura nakare kose, kubva zvino pane inozivikanwa GOG chitoro chichavawo neshanduro yeGNU / Linux yemutambo wevhidhiyo Shadow Warrior Classic Redux. Saka iwe unogona ikozvino kuenzanisa uye kurodha pasi kubva pawebhu chikuva cheichi chinozivikanwa chitoro kubva ichi chimwe link kuti tinokusiya. Parizvino iri 32-bit vhezheni, uye inoda mamwe mapakeji akaiswa pane ino sisitimu kana kugovera kwako kuri 64-bit kuti inyatsoshanda nemazvo. Ese aya mapakeji hapana chimwe kunze kwemaraibhurari makumi matatu nemasere emutambo kuti umhanye.
Mutambo wevhidhiyo unobatanidza inozivikanwa GOG inosimudzaSemazuva ese, nenzira iyoyo kumisikidza kuri nyore sezvaunoziva, uye isu tinongofanirwa kudzvanya mabhatani mashoma kuti tikwanise kuita mutambo unomhanya pane yedu yatinofarira distro. Saka inhau dzakanaka dzatinoona masviriro etsika iyi yechinyakare sisitimu yedu, yekupfura muropa ine zviyeuchidzo zvinoonekwa uye nekuwedzera.
Ini ndinofungidzira kuti uchitoziva nyaya iri seri kwemutambo uyu kumutsidzira izvozvi pane linux, Munhu wekutanga kupfura sezvatakataura mauri muchafanira kutarisana nevazhinji vevavengi nezvombo zvakasiyana zvinowanika mune ramangwana nharaunda rakavakirwa kuJapan, uko nyika yeJapan yakakomberedzwa nevarwi vasina vavariro dzakanaka kwazvo uye iwe ndiwe uchafanirwa kuisa pamberi pavo ...
Nenzira, kune avo vako vane yakagadzirirwa monitors akawanda Pakombuta yako komputa, unogona kumhanyisa matambudziko kana uchitamba neakawanda masikirini panguva imwe chete. Mutambo unobata hupamhi hwese nekutadza uye unoita kuti kutamba kuome Asi inogona kugadziriswa, nekuti kana mutambo wacho watangwa kekutanga, iyo faira inonzi sw-redux-local.cfg yekugadzirisa kuti ukwanise kugadzirisa resolution yauinayo. Zvimwe zvese zvinoshanda zvakakwana!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GOG ine iyo Linux vhezheni yeShadow Warrior Classic Redux
Hongu, asi nechirungu, haudaro
Isu tatova neKernel 4.14.1 pano